Multi-Point Lubrication Pump | Paompy fanosorana menaka multipoint
Home/Paompy elektrika famenosana herinaratra/DDB-XPE menaka fanosotra amin'ny teboka maromaro, fanaraha-maso solosaina micro, tohatra fanerena marobe
Product: Paompy fanosorana menaka DDB-XPE
1. Max. asa 31.5 Mpa
2. Hatramin'ny 15 Multipoints misy
3. Ny tsindrona tsirairay miaraka amin'ny mari-pamantarana fanerena ho an'ny fanaraha-maso ny ordinatera bitika sy maso
DDB-XPE Grease multi-tsipika lubrication paompy dia be mpampiasa amin'ny rafitra lubrication izay ny fantsona no zaraina ao anatin'ny 50 metatra; Misy fomba roa ny famolavolana ny lubrication rafitra toy ny menaka na menaka sodina famatsiana:
Famatsiana menaka na menaka mivantana miaraka amin'ny point-to-point, mifanandrify amin'ny friction surface miaraka amin'ny mari-pana ambony sy ny mari-pana ambony, toy ny bearings, bush shafts, bushings faritra lehibe, sns.
Ekipa miaraka mpaninjara mandroso andalana tokana, graded famatsiana menaka, mety amin'ny friction ambonin'ny famatsiana menaka afovoany, toy ny faritra kely ny bearings, bushings sy ny sisa. Ny DDB-XPE grease multi-line paompy fanosotra dia nanao fanatsarana lehibe ny famolavolana. Ny endri-javatra dia toy izao manaraka izao:
(1) Ny fampisehoana ankapobeny ny DDB-XPE grease multi-line lubrication paompy dia nihatsara ary ny Output tsindry dia 31.5 MPa.
(2) Ny andalana tsirairay dia misy valva fanaraha-maso ny tsindry ary mazava ny tsy fahombiazana.
(3) Ny rafitra manontolo dia matevina ary manana toerana fametrahana kely.
(4) Ny habetsahan'ny menaka na menaka sakafo dia 5ml / min, karazana famatsiana mivantana dia matetika mety ho an'ny mihidy rolling mitondra shaft, tanany, mitondra taila sy ny fanatanjahan-tena vice.
(5) Ny DDB-XPE grease multi-line lubrication paompy dia mety ho an-jatony lubrication teboka.
Fampiasana & Fampandehanana:
Ny andian-tsarimihetsika DDB-XPE grease multi-line lubrication paompy dia tokony hapetraka ao amin'ny toerana izay mety ny hafanana ambient, kely ny vovoka, ary mety amin'ny famenoana, fanitsiana, fanamarinana, fikojakojana ary toerana hafa mety.
Hamarino foana ny menaka fanosotra ao amin'ny fitahirizana mba hihazonana ny toetry ny menaka. Aza mandeha tsy misy menaka na menaka na tsy misy menaka.
Alohan'ny hanombohan'ny paompy fanosotra voalohany, ampio menaka maotera 30 ml eo amin'ny cylinder ary ampio menaka lithium avy eo. Tsy voarara ny menaka hampandeha ny motera.
Tsy maintsy mandeha amin'ny làlan'ny fonon'ny maotera izy io ary tsy tokony hivadika.
Ny menaka na menaka ao amin'ny DDB-XPE grease multi line lubrication paompy dia tazomina madio, ary manakana ny splashing akora tsy hiditra ao amin'ny paompy tanky ary hisy fiantraikany amin'ny fiainana fanompoana ny menaka fanosotra paompy.
Kaody famandrihana ny DDB-XPE Multi Point Grease Lubrication Pump
(3) Series = XPE Series (DDB-X Miaraka amin'ny fanerena fanerena isaky ny tsindrona + fanaraha-maso solosaina micro)
(4) Laharan'ny Port Outlet = 1 ~ 15 Ho an'ny safidy
DDB-XPE Multi Point Grease Lubrication Pump Data Teknika
modely fivoahan'ny Max. tsindry
(MPa) tahan'ny famahanana
(Fotoana / min) Motor Power
(KW) Tavoahangy menaka
[email voaaro]2021-11-17T21: 58: 15 + 00: 00